Ngobusuku bokugcina, abahlangene basekhaya be-bohemian babuthana edilini lokuzalwa lika-Oleg Mitvol. Inqubomgomo yaseRussia ngo-Okthoba 3 yaphenduka iminyaka engu-50 ubudala, kodwa manje kungenzeka ukuthi ihlangane nabangani kule mpelasonto.
Phakathi kwezivakashi zalesi sifundazwe kwakukhona izinkanyezi eziningi zebhizinisi lezemidlalo kanye nezemidlalo. Kuzo izithombe izinkanyezi ezisheshayo ukuzofaka ezinkanyezini zazo ezincane, ungabona uTatyana Navka, Alik Smekhov, uDmitry Peskov, uJasmine (ngoba umculi lokhu kungenye yezinto zokuqala emva kokuba umyeni wakhe ekhishwe ngaphansi kokuboshwa endlini).
Futhi phakathi kwezivakashi ze-stellar kwakukhona ama-Yudashkins ambalwa. I-couturier edumile yamuva yahlinzwa, yingakho elahlekelwa ngisho nokubonisa iqoqo lakhe. Kodwa-ke, ukungavumeli akuvimbeli u-Valentin Yudashkin ukuba angabonakali emnyakeni wokuzalwa wezombangazwe.
UTatyana Navka, u-Alika Smekhova nabanye babonisa ukuthi ku-Instagram isithombe sosuku lokuzalwa luka-Oleg Mitvol
Mhlawumbe akekho owayengathola ukuthi u-Oleg Mitvol wagubha umkhosi wakhe ngesibalo esikhulu, uma kungenjalo ukuxhumana nabantu. Izivakashi zombusazwe zithokozisa ngenjabulo izindaba zakamuva kubhalisile. Ku-Instagram kaTatyana Navka, u-Alika Smekhova, u-Marina Yudashkina, u-Anna Semenovich nabanye ohlonishwayo, kwakukhona imibiko yezithombe ezivela eholidini.
Ekwaba yizithombe, izivakashi azizange zithukuthele. Yiqiniso, phakathi kwabadumile kwakuyindoda engafanele ngokuphelele kwisizinda jikelele.
UTatyana Navka waletha indodakazi yakhe endala, u-Alexander Zhulin, emkhosini. Isithombe sibonisa ukuthi intombazane eneminyaka engu-16 ubudala izwa kabi kakhulu ngosuku lokuzalwa kwesisebenzi esiphezulu. Wonke umuntu uyajabula, ngaphandle kukaSasha Zhulina. Ngokuthakazelisayo, futhi wena, ababhalisile abathandekayo, uzizwa ukhululekile enkampanini yabahlobo bakho bomzali noma uphupha ngokuphunyuka? 😉
Izinkanyezi zomhlaba zenziwa emshadweni wendodana kaMikhail Gutseriev, ividiyo
U-Irina Amanti wabhekana nokushushiswa kuka-Olga Kazachenko, isithombe
UDmitry Khrustalev - iphupho labo bonke abesifazane, isithombe
U-Ksenia Borodina wenza iholidi elihle kakhulu laseNdiya, isithombe
U-Stas noYulia Kostyushkina balindele ukubuyiselwa emndenini
UDmitry Shepelev utshele amaqiniso amangazayo mayelana nendlela umkhaya wakhe aphatha ngayo uJeanne Friske
Amalungu aphilile, amathambo nemisipha
Ukunakekela izandiso: izici nezincomo
Indlela yokuhlanza ihhavini
Ukulala ngemva konyaka
Indlela yokuqonda uma indoda ifanele owesifazane
Isikhala somuntu wangasese
Tuna nge ushizi
Iveke elingalindeleki eSt. Petersburg
Izimbangela zengqondo zenkinga emndenini omusha
Ukuqapha, kuyingozi: izimpawu eziyisithupha ukuthi le ndoda ikubhubhisa
Ukuthuthukiswa ngokomzwelo kwengane yasenkulisa
Yiziphi izitofu ezidingekayo ezifuywayo?
Indlela yokubuyisela isimo sengqondo esihle